Doxycycline HCL mmiri soluble Powder 50% - China Shijiazhuang G-House Trading
Ọgwụ nje emeputa / soplaya, Antiparasitic Drugs, wdg
Macrolides Ọgwụ nje
Aminoglycosides Ọgwụ nje
tetracyclines Ọgwụ nje
β-lactams Ọgwụ nje
Central ụjọ na-atụ System Drugs
Ịnụ ọgwụ & antipyretic Drugs
Anti-Akwụkwụ na-adọ Drugs
Akụkụ okuku ume na System Drugs
Mmiri ọgwụ na yiri Drugs
Adrenocortical homonụ & Adrenocorticotropic Ókè mmiri ọgwụ
Akpanwa stimulant Drugs
Kpatụ Nutrition Drugs
Disinfection maka mpụga were
Medical ngwa & Instruments
Chitosan Quaternary ammonium Salt Biogel Ngwọta
Disposable akpali mmasị n'ime eriri mwekota
Disposable Medical Hydrogel Eye Kedo akwa
Endometrial nlele Ngwaọrụ maka Cytology
Ịkwụsịlata kpọrọ nkụ n'Ọnụ itucha
Carboxymethocel itucha Ngwọta
Akụkụ okuku ume na Tract Drugs
Broad-ụdịdị dị iche iche Ọgwụ nje
Ne mbukota Materials
Elu mbukota Materials
API (Active Pharmaceutical mgwa)
Ceftriaxone sodium Ọgwụ 1g
Diclofenac sodium Ọgwụ 3ml
Carbocisteine ​​sirop maka Children
Ọgwụ nje Cefazolin sodium maka Ọgwụ
Ciprofloxacin Mbadamba 500mg
Metronidazole Mbadamba 250mg
Gentamicin Ọgwụ 80mg / 2ml
Doxycycline HCL mmiri soluble Powder 50%
Port: Tianjin ma ọ bụ Shanghai Port
Ịkwụ Ụgwọ Okwu: T / T, L / C, ego gram, Western Union
Ịdị No .: 50%
Pharmacodynamic Ndị a Factors: ekwekọghị ekwekọ
Nchekwa Method: Prevent ukwuu Quality Nkwa na Oge
Iche: General Disease Prevention Medicine
Akụrụngwa: Chemical Sịntetik Drugs
Tụkwasịnụ Ikike: 50000
Doxycycline HCL mmiri soluble Powder 50% nwere ụfọdụ ruo n'ókè nke mgbochi maka mycoplasma, chlamydia, rickettsia, spirochete. Ọzọkwanwere mmetụta nke iche iche sara mbara antimicrobial, mwute bacteria. Doxycycline HCL mmiri soluble Powder 50%nwereelu lipid solubility na-yikarịrị ka banye n'ime ahụ anụ ahụ na oke mmiri, tinyere cerebrospinal ọmụmụ, prostate na anya.
Doxycycline HCL mmiri soluble Powder 50% Pharmacodynamics
Ngwaahịa a nwere mmetụta nke iche iche sara mbara antimicrobial, mwute bacteria. Also has a certain degree of inhibition for mycoplasma, chlamydia, rickettsia, spirochete, etc.
Doxycycline HCL mmiri soluble Powder 50% Pharmacokinetics
Doxycycline na-ekesa na obi, akụrụ, ngụ, muscle, nsia anụ ahụ, pleural effusion, abu, asu, synovial ọmụmụ na ascites. Ndị a maara dị ka ndị dị elu lipid solubility na-yikarịrị ka banye n'ime ahụ anụ ahụ na oke mmiri, tinyere cerebrospinal ọmụmụ, prostate na anya.
Doxycycline HCL mmiri soluble Powder 50% Na-egosi
Eji maka igbochi na ọgwụgwọ nke pasteurella ọrịa, brucellosis, anthrax na e. coli na Salmonella ọrịa, nnukwu akụkụ okuku ume na-efe efe, glanders, ịnyịnya strangles na ezi mycoplasma oyi baa, wdg
Ọzọkwa ejikarị dị ka oriri mmako ọgwụ ọjọọ, na mgbakwunye na a ụfọdụ ruo n'ókè ka mgbochi na ọgwụgwọ nke ọrịa, nwekwara ike melite oriri arụmọrụ na-akwalite ibu ibu.
-Achọ ezigbo Doxycycline HCL mmiri soluble Powder 20% Manufacturer & soplaya Anyị nwere a dum nhọrọ nke na-ahịa na-enyere gị na-okike. All ndị Doxycycline HCL mmiri soluble ntụ ntụ bụ àgwà na-ekwe nkwa. Anyị bụ ndị China Mmalite Factory nke Doxycycline HCL soluble Powder 50%. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko chere free ịkpọtụrụ anyị.
Previous: Medical Aluminium Foil maka ngwugwu
Osote: Sulfadoxine na Pyrimethamine Mbadamba
Ọgwụ nje Doxycycline HCL mmiri soluble Powde ...
Enrofloxacin HCL mmiri soluble ntụ ntụ
Erythromycin Thiocyanate mmiri soluble ntụ ntụ
Oxytetracycline Ọgwụ 20% 100ml
Gentamycin na Doxycycline soluble ntụ ntụ